'Acc. Blood Pressure (B…1.1.apk')
မိမိတို့ ဒေါင်းလို့ရတဲ့ APK ကိုဖုန်းမှာ INSTALL လုပ်ပေးလိုက်ပါ ပြီးတာနဲ့ ဖွင့်လိုက်ပါနော် အပေါ်ကပုံလေးတိုင်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒါဆို Pulse Rate ဆိုတဲနေ့ရာမှာ မိမိတို့ရဲ့ သွေးခုန်နှုန်း တမိနစ် လျှင် သွေးခုန်မှု အကြိမ်ရေ ကိုတွက်ချက် ထည့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် သည်နေရာမှာ ယျေ ဘူယျ အားဖြင့် အကြိမ်းရေ ( ၈၀ ) ကနေ ( ၉၉ ) အတွင်းသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်.
တိတိကျကျ သိလိုပါက မိမိ လက်ကောက်-၀တ်မှ ဖိထားပြီး တိုင်းတာ မှတ်သားနိုင်ပါတယ်..နော်
အောက်က mail (or) femal ဆိုတာရွေးလိုက်ပါ ဒါဆို Go To Stept2 ဆိုတာဆက်ကလစ်လိုက်ပါ
မိမိတို့လက်မဗွေပုံသဏ္ဍန်လေးပေါ်မှာ လက်မကို တင်ဖိထားလိုက်ပါ...ခဏအတွင်းမှာ မိမိရဲ့ အပေါ်သွေး အောက်သွေး ကိုဖေါ်ပြလာမှာဖြစ်ပါတယ်...
မှတ်ချက် ။ ။ တိကျမှု မရှိနိုင်ပါ...သို့ပေမယ့် အနီးစပ်ဆုံး စမ်းသတ်နိုင်ပါတယ်။